Ogaden News Agency (ONA) – Weeraro meela kala duwan lagu qaaday iyo roobkii dayrta oo ka curtay gobolka Jarar
Weeraro meela kala duwan lagu qaaday iyo roobkii dayrta oo ka curtay gobolka Jarar
25/08/2012 Hodan-wayne dagaal kadhacay waxaa askarta gumaysiga lagaga dilay 4 Askari waxaana lagaga dhaawacay 4 kale.
27/08/2012 Deegaanka lagu magacaabo Doog-cadeeye dagaal kadhacay waxaa askarta daalan ee gumaysiga ethiopia lagagaguu dilay 3 Askari waxaana lagaga dhaawacay mid kale.
28/08/2012 Dagaal kadhacay deegaanka lagu magacaabo Haraladi oo dhuxun katirsan waxaa askarta gumaysiga lagaga dilay 2 Askari waxaana laga dhaawacay 2 kale,sidoo kale isla Deegaanka Dhuxun Dagaal kadhacay waxaa askarta gumaysiga lagaga dilay 2 askari.
29/08/2012 Deegaanka Gaddo oo katirdan Magaalada Baabili ayaa waxaa howlgal gaar ah lagu qaaday deegaankaasi hawlgalkaas sidii loo qorsheeyay u dhacay iyadoo shaqsi gumaysiga masuul uga ahaa ciqaabta dadka shacabka ah ciqaabtuu mudnaa lagu mariyay.
Dhinaca kale xiligaan roobabkii dayrta oo laga sugayayay wadanka ogaadeeniya ay ayaa waxaa uu ka curtay deegaano ka mid ah dalka. Deegaanada Roobka dayrta sida fiican uu uga da’ay ayaa waxaa kamid ah Gobolka Jarar, deegaanada kala ah;
Awaare, Koore, Gurdumi, Bukudhawo iyo Moordhe, waxaana la sheegayaa inta badan baliyaada deegaanadaasi inay buuxsameen. Waxaa kaloo ay roobabku ka da’een Gobolka jigjiga, Fiiq, Xamaro illaa galbeedka.
Dadka deegaanadaasi ayaa si wanaagsan ugu diirsaday raxmaadka Eebbe taasoo haduu Ilaahay idmo u saamixi doonta inay kasoo kabtaan cunaqabataynata ay saareen gumaysigu dadka shacabka ah.
Waxaana la rajaynayaa in deegaano kale uu maalmaha soo socda ka curto roobku.